Atleta, Politisiana Manohana ireo Zeorziàna Milalao Baolina Kitra Manaiky Ny Zon’ny LGBT (Pelaka ) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Novambra 2017 2:25 GMT
Vakio amin'ny teny Türkçe, Español, русский, Italiano, 繁體中文, English
Ludovic Bertron avy any New York City, USA. CC BY 2.0.
Ity manaraka ity dia lahatsoratra fiarahamiasa avy amin'ny EurasiaNet.org ary nosoratan'i Giorgi Lomsadze. Nahazoana alàlana ny famerenana azy eto.
Tratry ny fampiakarampeo ao amin'ny tanindrazany ilay Zeorziàna mpilalao baolina kitra, Guram Kashia, noho ny safidiny haneho fanohanana ny zon'ny pelaka ao Pays-Bas, saingy ny fanohanana avy amin'ireo Zeorziàna mpankafy, atleta ary politisiana, isan'izany ny Ben'ny Tanàna voafidy tao Tbilisi , Kakha Kaladze, mpilalao baolina kitra malaza indrindra any Zerozia, dia toa manosokevitra hoe mety hiova ny fomba fijerin'ny olona ao an-toerana momba ity olana sarotra indrindra amin'ny kolontsaina ity.
Taorian'ny nisehoan'i Kashia, 30 taona, mpiandry vodilaharan'ny ekipa Holandey, Vitesse Arnhem, niaraka taminà fehilamba fanao amin'ny sandry niloko avana, nandritra ny lalao natao tamin'ny 15 Oktobra tao Pays-Bas, nipoapoaka ny media sosialy Zeorziàna. Ny 31 Oktobra, nanao famoriambahoaka nahoraka be teo akaikin'ny Federasionan'ny Baolina Kitra Zeorziàna ny “Diaben'ireo Zeoriziàna”, vondrona avy amin'ny elatra faran'ny havanana. Nitàna fanàla sy afisy, nangatahan-dry zareo ny fanesorana an'i Kashia tsy ho ao anatin'ny ekipam-pirenen'i Zeorzia.
Nitarika ny tolona ilay mpihira mamiratra Gia Korkotashvili, fantatra amin'ny hoe Korkota, nanora-tena ho mpiady ho an'ireo soatoavina nentim-paharazana, niseho tao amin'ny fahitalavitra nikiakiaka ireo faminaniana hoe tsy ho ela ny fiavian'ny faharinganan'ireo pelaka. “Andraso fotsiny dia hahita isika rehefa tonga any an-tranontsika ireo pelaka,” hoy izy tao amin'ny fahitalavitra Zeorziàna avy eny amin'ilay famoriambahoaka.
Ao anaty firenena iray izay efa hatry ny ela no tsy nanekena ny resaka pelaka, tsy zava-baovao loatra ny fipoahana tahaka izany. Saingy ireo fanohanana miparitaka be sy ireo fanehoakevitra manohitra ny fanavakavahana no zavatra vaovao.
Raha raharahanà vondron'olona liam-pivoarana sy mpikatroka vitsy an'isa ny fisoloana vava ny zon'ny LGBT, ankehitriny dia maro, manomboka amin'ny Filoha Giorgi Margvelashvili ka hatramin'ilay Zeorziàna atleta malaza sy ireo tsirairay mpankafy, no niteny ho an'i Kashia sy ny fanajan'ny erantany ny fitoviana.
“Nolazain'i Kashia fa ny olombelona rehetra, tsy ijerena ny fironany ara-pananahana, dia mpikambana tanteraka amin'ny fiarahamonintsika ary tsy azo ekena ny hanavakavahana azy ireny mifototra amin'izay heverina fa fahasamihafàna mety hananan'izy ireo,” hoy i Zviad Sichinava, filoha nitarika nandritry ny fotoana ela ny Federasiona Baolina Kitra Zeorziana, saingy efa nitsahatra nisotro ronono. Ny filohan'ny Federasiona amin'izao fotoana izao, Levan Kobiashvili, parlemantera avy amin'ny antoko Nofinofy Zeorziàna eo amin'ny fitondràna, sy ireo hafa mpanohana azy, dia nandefa sarin'i Kashia tao amin'ny Facebook nisalotra ny saina Zoerziàna sy niely be tokoa.
“Firenena demaokratika isika. Manana zo haneho ny heviny ny tsirairay, tsy ijerena ny zom-pirenena ananany, ny fironany ara-pananahana na ny fivavahana arahany,”hoy ny Ben'ny tanàna voafidy tao Tbilisi, Kaladze, kintana fahiny tao amin'ny AC Milan no sady kapitenin'ny ekipam-pirenena baolina kitra ao Zeorzia.
Toa nanoritra tsipika ihany koa ny fanjakàna momba izay fomba fihetsika azo ekena mandritra ireo hetsipanoherana manohitra ny LGBT. Tsy vitan'ny polisy ny nanakana fanafihana iray nanditra ilay famoriambahoaka nitakiana ny zon'ny LGBT tamin'ny 2013, saingy, tamin'ity indray mitoraka ity, niatrika ny polisy ary nisambotra mpikatroka valo avy amin'ny Diaben'ny Zeorziàna rehefa tsy voafehiny intsony ny famoriambahoaka nataon'izy ireo. Nilaza ny hadisoam-panantenany tamin'ny nataon'ireo mpanohana azy ireo mpitarika ilay famoriambahoaka,.
Efa ela i Korkota sy ireo nàmany no nitaky ny fitompoana ny maripamantarana ara-kolontsaina Zeorziàna, fehezana toetra sy fombandrazana izay mazàna no faritana hoe kartveloba na “maha-Zoerziàna .” Tany am-piandohan'ity taona ity, nifamory izy ireo mba hanohitra ireo mpifindra monina avy any Afovoany Atsinanana. Nanorisory olona maro ireo fanambaràna feno fanavakavahana sy mankahàla vehivavy nataon'ilay vondron'i Korkota.
Nampangain'ireo Liberaly Zeorziàna ny antoko Nofinofy Zeoriziàna eo amin'ny fitondrana ho milefitra amin'ny fomba fijerin'ny elatra havanana tahaka izany, amin'ny fanaovana ho tsy ara-dalàna ny fahazoana tany fambolena ho an'ireo vahiny ary famaritàna araka ny lalàm-panorenana ny fanambadiana ho toy ny fikambanan'ny lahy sy ny vavy.
Hita izao fa ny raharaha Kashia dia toa mametraka ireo manampahefana sy fatra-pifikitra amin'ny fombandrazana ho aminà tendro roa mifanohitra.
Ny valinteny erantany momba ilay fehilamba kely nataon'ilay atleta teny amin'ny sandriny dia nahatonga ireo mpikambana sasany ao anatin'ny vondrom-piarahamonina LGBT ao Zoerzia ho velom-panantenana amin'ny hanekena azy ireo ao anatin'ny fiarahamonina Zeorziàna. “Mbola lavitry ny afo ny kitay, saingy efa mahita fiovàna aho,” hoy ny mponina iray ao Tbilisi naneho hevitra tao amin'ny EurasiaNet.org.